Lockheed L-1049 Super aayadaha
Lockheed L-1049 Super aayadaha sano 3 4 bilood ka hor #141
Waa maxay qarsoon oo diyaarad this ka badan daqiiqo 5-6 duulaya oo aan dhamaystiran engine failure? Ma ahan oo keliya mid ka mid engine waqti, laakiin oo dhan hal mar. Waxaan mar walba ku lahaa meel qalbigayga ku jirta inaan iyaga u, gaar ahaan marka gebi ahaanba cirro ciidamada badda, nooca Cigal (oo la disc radar fur weyn) duuli lahaa our guriga ka badan oo ka mid Naval Air Station ah aabaheey xarun u ahaan jiray.
Lockheed L-1049 Super aayadaha sano 3 4 bilood ka hor #142
Wax dhibaato isku mid ah iyo sidoo kale saaxiibada anigaa iska leh. Waxaa jira hal xal fiican, koox caadiga ah (ma super) ayaa duulaya oo aan qalad ...
Lockheed L-1049 Super aayadaha sano 3 4 bilood ka hor #144
Waad ku mahadsantahay jawaabtaada. Waxaan ogahay in ay tilmaamaha - in - shaqeeyaan, (gudahood ah "akhri-ii) aan ka badnayn isticmaalka a RPM qaarkood socda qaadataan-off, laakiin in uu macquul aheyn .... waxa kaliya dhulka ku dhicin; baahan yahay xoogga oo dhan si ay u sii joogo ilaa. Haddaba waxaan leedahay in la sameeyo oo dhan waa ogaado sida loola aad guys wadaagaan PIX.
Mar kale, mahadsanid PAYSON
Lockheed L-1049 Super aayadaha sano 3 4 bilood ka hor #161
ma waxaad furi qaybood cowl ah?
Lockheed L-1049 Super aayadaha sano 3 4 bilood ka hor #162
Just isku dayay ee qaybood cowl furan .... ka dib-up diiran ayay u fuusho ka raagay inuu 4K, dhigay markeeda a back to saldhig. Siddeed galay horyaalka, aaladaha vacuum bilaabay si ay u tagaan mid ka hooseeyo by mid ka mid ah. Soooo, 8 daqiiqo ka dib, ayay hoos u dhacday sidii dhagax oo kale. Laakiin, hey, in rikoor. Thanks for info in kastoo, waxaan u mahad celineynaa.
Lockheed L-1049 Super aayadaha sano 3 4 bilood ka hor #165
Anigu waxaan ahay "dhawr" kooxo FB ah FSX. Waxaan weydiisan doonaa agagaarka ya
Xitaa helay a saaxiibada yar kuwa aadka u yaqaana in duulaya ah B-17, sidaas oo kale ayaan iyaga la hubiyo doonaa mid aad u
Connie waa shimbir soo socda waxaan ku daray in raxan ah VA ee, mar baan ka heli inta kale ee shimbiraha our bixisay.
Hadda waan helay ku filan inaan bixiyo lacagta 767-200ER, taasoo ka baxaysa labada 748Fs iyo labada 772LR. 744LCF iyo 748s waa dadkeena lacagaha ugu weyn, inkasta oo 772LR marka duulimaadka ku haboon ee lagu iibsado ay keeni karto lakin mushahar macquul ah xaqiiqda ah midka soo socdaa ma ahan ilaa bisha Agoosto iyo markaa kadibna waa inaan haystaa shimbiraha ayaa loola cararay
Lockheed L-1049 Super aayadaha sano 3 4 bilood ka hor #178
Wow Ruuxa ... codadka wanaagsan iyo mahad walaac ah. Aaaaah, B-17 ee. Caadi ahaan waxa aan raaco mid fursad kasta oo aan ku heli. Haddii aad waligaa fursad kortaan mid loo yaqaan "The Aluminum daruuro leh" aad u hesho, u samayn. (Haddii aad horay u haysan) Waxay waxaa la dhisay goor dambe in dagaalka qaaday England. Sida qaddar u lahaa, oo dagaal ku dhamaatay iyada yimid. Sidaas daraaddeed, marna looma dadaal dagaalka. Waa gabi ahaanba cajiib ah oo gudaha iyo dibaddaba. All socdo alwaax iyo tarooli qoriga u taagtaa sida geed marnaba loo isticmaalo. waxaa kor eega on line si ay u arkaan halka ay booqan doonaan. Haddii aad hesho gaadiid, noqon horeysay ee line (aan sameeyey oo helay in ay kor u qaadeen oo dalka kursiga boodi midig ka danbeeya duuliyaha ah off), oo xaqiiqo ah soo qaado camera wanaagsan.
Lockheed L-1049 Super aayadaha sano 3 4 bilood ka hor #186
Laga soo bilaabo warqad README ah oo ku xiran xiriirka. Raac adiguna waad fiicnaan doontaa. Waa inaad adigu dejisid PROP si aad u hubisid RPM si aad uga ilaaliso dhibaatada.
(5) Xuquuqda-riix simicon jeeg-sumadda inuu u soo yeedho kor u faahfaahsan suuqa kala status
muujinaya engine iyo duulimaadka readouts lagama maarmaanka ah.
(7) Engine failure waxaa laga yaabaa in ay dhacaan marka matoorada ku shaqeeya ee
2800 + RPM muddo dheer (watch out for this gaar ahaan
ka dib qaadan-off) ama haddii ay gacanta ku Spark = HOR LEH at 2400 + RPM. Iyada oo ku xidhan
on sare, matoorada laga yaabaa in guul darreysato saddex ilaa shan daqiiqo gudahood. Isticmaal
Xoojinaya lever sayidkiisa garoonka ama simicon garoonka Engine si ay ula qabsadaan RPM sida
xaaladda loogu baahan yahay horyaalka hadda (eeg liiska). on the
guddi Status, oo gaabnaa hp engine isticmaalo ee codes midabka soo socda:
Caddaan - OK, khatar kuma aha guuldareysiga;
jaalaha ah - dejinta awoodda hadda ka dhigi doonaa waxyeello haddii aad u dheer
ee qaabeynta (xataa ka dib markii throttling dib ama la qabsado
RPM iska joogi doonaa ilaa huruud engine ah failure gudaha
Counter waa dib u eber (laga yaabaa inay qaadato dhowr daqiiqo)
casaan - si deg-deg ah ayaa loo baahan yahay - yareeya xargaha iyo garbaha.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: tdhelpline
Lockheed L-1049 Super aayadaha sano 3 4 bilood ka hor #187
tnig .... mahad info ah, laakiin hal su'aal - ayaa aad waligaa runtii waxan ku samayseen? dembi No, laakiinse waxaan isku dayay oo aan marnaba markey Mixraabka ugu soo dhaafay ft 1200. ka diiran-up on runway. Waxaa laga yaabaa in aniga kaliya, laakiin waa mid kaliya ee aan wax dhibaato ah (35 - 45 diyaarado ka socday goobahan). Taas waxaa ka mid ah qaar ka mid ah ugu weyn ee Boeing, lockheed, ama Russia ay bixiyaan. Waxaan qabaa in aan la kulmay ciyaarta oo waxaa i burbursaday. Waxaan qabaa "x brand" ayaa ka mid ah in ay bixiyaan. Waan ku siin doonaa go a, haddii aan (yahan), my xaaskiisa u sheego iyadu xaq u ahaa.
Mar kale, mahad iyo Salaan, PAYSON
Lockheed L-1049 Super aayadaha sano 3 4 bilood ka hor #188
kuwaas oo ka dhigaysa this Super Connie? Waxaan laga yaabaa in ay leeyihiin eegno naftayda waxaa at lol